उड्ने हैन त हावामा ? सुपरम्यान बन्नुको मज्जा बेग्लै ! « Khabarhub
उड्ने हैन त हावामा ? सुपरम्यान बन्नुको मज्जा बेग्लै !
२६ श्रावण २०७६, आइतबार
काठमाडौं–काभ्रेपलाञ्चोकको पर्यटकीय गन्तव्य धुलिखेलस्थित थाक्लेडाँडामा साहसिक खेल ‘जीपलाइन’को मज्जा लिने पर्यटकको संख्या बढ्दो छ ।
थाक्लेडाँडाबाट पाँचखालको खावासम्मको एक किलोमिटर दूरीमा खेलिने यो साहासिह खेल गत फागुनदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जीपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै यो क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेको छ । जीपलाइन खेलमा विदेशी पर्यटकहरु आउने क्रम पनि बढिरहेको संचालकको भनाइ छ ।
जीप लाइनमा रमाउनेहरुका लागि सञ्चालकले तीन प्रकारका खेलहरुको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । जसमा क्लासिक जीपलाईन (एक जना), कपल जीपलाइन (दुई जना) र सुपरम्यान जीप लाइन (सुतेर) छन् । जुन रोजी छानी खेल्न पाइन्छ ।
जीपलाईनमा एउटा टावरदेखि अर्कौ टावरसम्म पुग्न १ मिनेट २० सेकेण्ड लाग्नेभए पनि मानिसको तौल र रक्तचापमा समेत निर्भर रहने हुँदा समय घटबढ हुनसक्ने सञ्चालक केदार थापाले जानकारी दिए ।
हावामा उड्न कति लाग्छ ?
साहसिक खेल जीपलाइनमा तीन प्रकारका खेल छ । तीनै प्रकारका खेलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि खेलको शुल्क पनि फरक–फरक तोकिएको छ ।
नेपाली नागरिकका लागि क्लासिक जीपलाईनका लागि २ हजार ५ सय, कपल जीपलाइनका लागि ४ हजार ५ सय र सुपरम्यान जीप लाइनका लागि ३ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ लाग्नेछ ।
यस्तै सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि क्लासिक, कपल र सुपरम्याप जीपलाईनमा क्रमशः ३ हजार, ४ हजार र ५ हजार शुल्क तोकिएको छ भने, अन्य मुलुकका पर्यटकले क्रमशः ३ हजार ५ सय, ४ हजार ५ सय र ६ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।